e-LinkCare bụ otu nwere nnukwu agụụ idobe ọkwa ọhụrụ, ihe ọmụma, nka nka, ọrụ.
e-LinkCare gbara mbọ ịnye ngwọta maka ọrịa iku ume, ọrịa obi na ọrịa metabolic.
Ọhụụ anyị bụ ka anyị bụrụ onye na -eweta ụwa zuru oke na ọgwụgwọ ọrịa na -adịghị ala ala maka ngalaba ọkachamara na nlekọta ụlọ.
e-Linkcare Meditech Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ mba dị iche iche nwere teknụzụ dị elu wuru site na imekọ ihe ọnụ n'etiti London UK na Hangzhou China nwere ụlọ nrụpụta nke ya dabere na Xianju, Zhejiang, China ebe anyị na-arụpụta ọtụtụ ngwa ahụike nke imewe anyị gụnyere Accugence TM Multi Monitoring System, UBREATH TM Spirometer Sistemụ wdg.
Kemgbe e guzobere ụbọchị, e-Linkcare Meditech Co., Ltd. na-agba mbọ ịkwalite njikwa ọrịa na-adịghị ala ala site na teknụzụ dị oke ọnụ, imebe mmadụ, usoro nrụpụta nke ọma yana mgbakwunye dijitalụ na ekwentị mkpanaaka. Anyị na -agbasi mbọ ike maka ịdị mma, ahụmịhe onye ọrụ dị nro, yana ihe ọhụrụ na -aga n'ihu dịka ozi anyị.
e-Linkcare Meditech Co., Ltd.nwere ndị ọrụ raara onwe ha nye na ahụmịhe iji rụpụta R&D, Azụmaahịa na Ahịa, ọ bụ otu nwere nnukwu ọchịchọ ịnọgide na -enwe ọkwa ọhụrụ, ihe ọmụma, nka nka, ọrụ ka ewepụta azịza agbakwunyere. Ebumnuche anyị iwulite mmekorita siri ike na ndị ahịa anyị na uru nkwanye ugwu na ntụkwasị obi. Anyị kwenyesiri ike na e-Linkcare Meditech Co., Ltd. nlele nlebara anya na-enye aka na nlekọta ahụike ka mma, site na ịnye data ịchọrọ, oge na ebe ịchọrọ ya, iji mee mkpebi ahụike ziri ezi ngwa ngwa. Nke a bụ ihe anyị lekwasịrị anya. Ka anyị na -eme nke a, anyị na -agbakwa mbọ ịkwanyere ma atumatu ime obodo yana ụkpụrụ mpụga iwu.
Spirometer nke pneumotachograph, 5.2 Ọbara shuga, Ngwa Nnwale Nnwale Ọbara Ọbara, Igwe Nnwale Ọbara Ọbara, Companylọ ọrụ kacha mma na -enyocha shuga, Ọbara ọbara na -ebu ọnụ 100,